Ny klika malaza indrindra amin'ny afisy sarimihetsika | Famoronana an-tserasera
Ny cliches malaza indrindra amin'ny afisy sarimihetsika
Ny zava-drehetra dia mifangaro na manafoana zavatra hafa. Ity hevitra ity dia arovan'ny mpanakanto toa an'i Kirby Ferguson izay manamafy fa ny sanganasa noforonina dia fandikana indray ny sanganasa efa misy, ka izay rehetra noforoninay dia vokatry ny andian-kery ary toy izao ny foto-kevitry ny "vaovao" araka ny fahazoantsika azy dia tsy misy. Raha ny marina dia tsy mila mijery lavitra loatra isika vao hahalala izany. Ny afisy sarimihetsika dia ohatra tsara satria nofenoina karazana klika sy foto-kevitra miverimberina foana izy ireo eo ambanin'ny tarehy samy hafa sy ny nuances samihafa, na dia averimberina foana aza ny hevi-dehibe sy ny hevitra.
Nilaza zavatra tena mahaliana i Ferguson: ny hevitra dia heverina ho fananana, toy ny loka tsy manam-paharoa sy tany am-boalohany na "fonosana" izay misy fetra mazava be. Na izany aza ho azy ny hevitra dia tsy milamina loatra ary tena sosona, mifamatotra ary mifamatotra sy mifamatotra izy ireo.
Toetra mitokana hita avy any aoriana ary amin'ny ankapobeny dia tsy misy afa-tsy ny fitaovam-piadiana tiany ihany.
Tava lehibe amin'ny endri-tsoratra kely kokoa sy miaraka amin'ny sary eny afara.
Toetra iray tohanan'ny iray hafa. Miverina miverina ary mombamomba ny mpijery.
Tarehin-tsoratra iray na maromaro (matetika lahy) hita eo anelanelan'ny tongotry ny vehivavy.
Tarehintsoratra roa mizara fandriana iray.
Maso iray (ampiasaina amin'ny horonantsary mampientam-po na mampientam-po indrindra.
Fampiasana ankapobeny ny loko manga.
Fampiasàna loko mainty sy fotsy mifanohitra avo lenta amin'ny sarimihetsika hetsika sy sehatry ny asa ratsy.
Toetra mivezivezy manerana ny faritra an-tanàn-dehibe ary misy feo manga.
Famoronana endrik'olona amin'ny alàlan'ny zavatra sy singa hafa.
Fampiasana vehivavy miakanjo mena amin'ny maha-fanambarana amin'ny dokambarotra sy mariky ny filan'ny nofo.
Sarony na afeno ny maso sy mason'ireo olo-bitantsika hamorona hafetsena.
Tarehintsoratra taloha miaraka amin'ny lohateny sy litera mifanindry.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny cliches malaza indrindra amin'ny afisy sarimihetsika
Famaritana marika: mpanakanto 82 no nitondra afisy dokambarotra 600 hosoka 'teny an-dalamben'i Paris mba hanohitra ny COP21